SOMALIA DIGNIINTA MARKA - OGEYSIISKA QALABKA
Saturday December 15, 2018 - 20:02:51 in Wararka by Mogadishu Times
Midabada muuqda ee calaamadda waa jaalaha, cadaan, oranji, casaan, guduud, casaan iyo buluug. OGAYSIIS WAA BIXINAYAA in calaamadda ganacsiga ee kor ku xusan tahay calaamadda ganacsiga ee: Instagram, LLC, a corporation organised and existing
Midabada muuqda ee calaamadda waa jaalaha, cadaan, oranji, casaan, guduud, casaan iyo buluug. OGAYSIIS WAA BIXINAYAA in calaamadda ganacsiga ee kor ku xusan tahay calaamadda ganacsiga ee: Instagram, LLC, a corporation organised and existing under the laws of the State of Delaware of 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, United States of America
waxaana loo isticmaalaa iyadoo lala xiriirinayo:
Fasalka 09: qalabka kombiyuutarka; Barnaamijka kombiyuutarada ee shabakadda bulshada iyo la-qabsiga bulshooyinka internetka; Qalabka horumarinta qalabka kombiyuutarka Software kombiyuutarka loogu talagalay isticmaalka sida barnaamijka codsiga barnaamijka (API); Interface programming interface (API) ee loogu talagalay isticmaalka barnaamijyada dhismaha software; Interface programming interface (API) ee barnaamijka kombiyuutarka oo fududeeya adeegyada internetka ee shabakadda bulshada iyo xogta soo noqoshada, gudbinta, soo dajinta, helitaanka iyo maamulka; Barnaamijka kombiyuutarka ee abuurista, maareeynta, iyo isdhexgalka bulshada internetka; Barnaamijka kombiyuutarka ee loogu talagalay abuurista, qaabaynta, soo dejinta, soo-dejinta, soo-dejinta, u-fiirinta, soo-deynta, soo-bandhigidda, soo-bandhigidda, gundhigidda, taariikhda, kombiyuutarka shabakadaha internetka iyo isgaarsiinta; Barnaamijka kombiyuutarka loogu talagalay wax ka beddelidda iyo awoodinta gudbinta sawirrada, maqalka, maqalka muuqaalka iyo fiidiyowga iyo xogta; Barnaamijka kombiyuutarka loogu talagalay wax ka bedelista sawirrada, sawirada iyo maqalka, fiidiyoowga, iyo muuqaalka maqalka-muuqaalka leh ee sawirrada sawirada iyo saamaynta xaqiiqda (AR), sida sawirrada, animations, text, drawings, geotags, tags metadata, hyperlinks; Barnaamijka kombiyuutarka ee uruurinta, maamulida, hagaajinta, abaabulidda, wax ka beddelidda, gudbinta, wadaagga, iyo kaydinta macluumaadka iyo macluumaadka; Barnaamijka kombiyuutarka ee dirista iyo helitaanka farriimaha elektiroonigga ah, digniinta, ogeysiisyada iyo xasuusiyayaasha; Qalabka kombuyuutarka raadinta; Software kombiyuutarka si loogu isticmaalo abuurista, maareeynta, qiyaasida, iyo faafinta xayaysiinta dadka kale; Server-ka, oo ah, kumbiyuutar kombuyuutar loogu talagalay keydinta xayeysiinta iyo bixinta xayeeysiinta boggaga internetka; Software dhab ah oo la qabsaday; Barnaamijka kombiyuutarka si loogu dhejiyo xogta elektarooniga ah ee jawiga adduunka dhabta ah ee loogu talagalay ujeedooyinka madadaalada, xiriirinta, iyo xiriirka bulshada; Barnaamijka kombiyuutarka si loo suurtageliyo horumarinta, qiimeynta, imtixaanka, iyo dayactirka barnaamijyada moobiilka ee qalabka isgaarsiinta elektaroonigga ah, oo ah taleefannada gacanta, casriga, kombiyuutarada gacanta iyo kumbuyuutarka kombiyuutarka; Barnaamijka kombiyuutarka, oo ah,
Interface Interface ah oo loogu talagalay fududaynta isdhexgalka dadka iyo mashiinnada; Software-kumbuyuutar oo la yaqaan, software kombiyuutar lagu soo iibsan karo iyo software-ka mobile-ka ee raadinta, go'aaminta iyo wadaagista goobaha; Software kombiyuutarka loogu talagalay maadada wireless, xogta iyo bixinta macluumaadka; Barnaamijka kombiyuutarka si loo sahlo helitaanka, soo bandhigida, qaabeynta, isku xirka, wadaagista iyo bixinta warbaahinta elektaroonigga ah iyo macluumaadka iyada oo la adeegsanayo internetka iyo shabakadaha isgaarsiinta; Software kombuyuutar, oo ah, codsi bixiya farsamooyinka shabakada bulshada; Software kombiyuutar, software kombiyuutar oo lagu soo iibsado iyo barnaamijka moobiillada moobiilka ee abuurista, maareeynta iyo helitaanka kooxaha bulshada dhexdeeda; Barnaamijka kombiyuutarka ee la kashifi karo si uu u eego loona dhexgalo nuujinta sawirrada, maqalka, maqalka-muuqaalka iyo fiidiyowga iyo qoraallada iyo macluumaadka la xidhiidha; Barnaamijka kombiyuutarka ee la iibsan karo ee lagu helo raadinta nuxurka iyo content publishers, iyo ku biiritaanka content; Barnaamijka loogu talagalay abuurista iyo maareynta qiyaasaha warbaahinta bulshada iyo xisaabta user; Qalabka sawirada iyo fiidiyoowga, sida, dukaamada lagu qabto, la soo dajiyo, wax ka beddelka, daabacaadda iyo la wadaago sawirrada digital-ka iyo fiidiyaha; Software kaas oo u sahlaya shakhsiyaadka, kooxaha, shirkadaha, iyo calaamadaha si ay u abuuraan oo ay u sii wadaan joogitaan online ah ujeedooyin suuq ah; Barnaamijka loogu talagalay dadka xayeysiinta ah si ay ula xiriiraan oo ula falgalaan bulshada internetka; Barnaamijka loogu talagalay streaming multimedia madadaalo; Software computer; Barnaamijka kombiyuutarka ee dirista iyo helitaanka farriimaha elektiroonigga, sawirrada, sawirrada, maqalka iyo codka maqalka ee kombiyuutarka internetka iyo shabakadaha isgaarsiinta Kombuyuutar kombiyuutarka lagu shaqeeyo sawirrada, sawirrada, maqalka, fiidiyaha, iyo qoraalka; Software messaging
Fasalka 35: Suuq-geynta, adeegyada xayeysiinta iyo bixinta, tusaale ahaan, bixinta macluumaadka ku saabsan qiimo dhimista, tigidhada, dib u bixinta, foojarrada, isku xirka shabakada tafaariiqda ee kuwa kale, iyo dalabyo gaar ah oo loogu talagalay alaabta iyo adeegyada dadka kale; Bixinta adeegyada cilmi-baarista iyo adeegyada macluumaadka; Horumarinta badeecadaha iyo adeegyada dadka kale iyada oo loo marayo shabakadaha internetka iyo isgaarsiinta; ganacsiga iyo adeegyada xayeysiiska, kuwaas oo ah qorshe warbaahin iyo warfaafinta warbaahinta ee ganacsiyada kale iyo adeegyada xayeysiiska, kuwaas oo ah, adeegyo xayeysiin ah ee raadinta waxqabadka xayaysiinta, maaraynta, qaybinta iyo adeegga xayaysiiska, falanqaynta xogta xayeysiiska, warbixinta xayaysiinta, iyo si loo hagaajiyo xayeysiinta waxqabadka; Adeegyada la-talinta ee dhinacyada xayeysiinta iyo suuq-geynta, kuwaas oo ah, in la isku habeeyo xayeesiinta iyo dadaalka suuq-geynta dadka kale; Bixinta xarumaha internetka ee isku xirka iibiyaasha iibsadaha; Xayaysiinta, suuq-geynta iyo kor u qaadida badeecadaha iyo adeegyada dadka kale iyadoo la isticmaalayo qalab muuqaal iyo muuqaal ah oo ku saabsan dhacdooyinka gaarka ah; Bixinta tas-hiilaad online ah oo loogu talagalay fiidiyowga soo-nooleynta ee dhacdooyinka xayaysiinta Dejinta iyo qabashada munaasabado gaar ah oo loogu talagalay ujeedooyinka ganacsiga, dhiirigelinta ama ujeedooyinka; Bixinta wicitaanada ganacsiga ee internetka oo ka kooban ganacsiyada, badeecada iyo adeegyada dadka kale.
Fasalka 42: Adeegyada kombuyuutarrada, oo abuuraya beelaha farshaxan ee loo adeegsado kuwa diiwaangashan si ay u abaabulaan kooxo, shirar, iyo dhacdooyin, ka qaybqaataan doodaha iyo ka qaybqaataan isku-xirka bulshada, ganacsiga iyo bulshada; Adeegyada kombiyuutarada, oo ah, martigalinta goobaha internetka ee loogu talagalay dadka kale si ay u abaabulaan una qabtaan kulanno, munaasabado iyo doodo dhexdhexaadin ah iyada oo la adeegsanayo shabakadaha internetka iyo isgaarsiinta Adeegyada kombiyuutarka ee nooca elektaroonikada shakhsi ahaaneed iyo shakhsiyaadka kooxeed ama boggaga internetka ee ku jira macluumaadka isticmaale ama cayiman, oo ay ka mid yihiin, maqalka, fiidiyowga, sawirrada, qoraalka, content, iyo xogta; Adeegyada kombuyuutarrada, oo ah, inay bixiyaan makiinado raadin si ay u helaan xogta internetka iyo shabakadaha isgaarsiinta; Bixinta qalabyada internetka oo leh tiknoolajiyad u suurtagelisa dadka isticmaala internetka in ay abuuraan qormooyin shakhsiyadeed oo ku saabsan macluumaadka xiriirka bulshada iyo ganacsiga, si loo wareejiyo loona wadaago macluumaadka noocyada kala duwan ee shabakadaha internetka si ay u galaan shabakad bulsho, iyo inay maamulaan xisaabtooda shabakadaha bulshada; Bixinta adeegga ku-meel-gaadhka ah ee software-ka aan la iibsan karin ee shabakadda bulshada, abuurista bulsho bulsho, iyo gudbinta maqalka, fiidiyaha, sawirrada, qoraalka, content, iyo xogta; Adeegbixiyaha adeegga codsadaha (ASP), sida, martigelinta barnaamijyada kombiyuutarka kombuyuutarrada kuwa kale; Barnaamijka adeega adeega (SAAS) ee barnaamijka u diraya dirista iyo helitaanka farriimaha elektiroonigga ah, ogaysiisyo iyo digniino; Bixinta adeegga ku-meel-gaadhka ah ee software aan la soo qaadan karin si loogu isticmaalo qaabeynta, maareynta, qiyaasida, falanqeynta, faafinta, iyo u adeegidda xayeysiinta dadka kale; Barta internetka ee iibka ad-iibsashada, oo ah, bixinta barnaamijyada aan la iibsan karin barnaamijyada u oggolaanaya iibsadaha iyo iibiyeyaasha xayeysiisyada internetka si ay u iibsadaan oo u iibiyaan liiska xayeysiinta; Adeegbixiyaha adeegga codsashada (ASP) oo ku saleeya software si loogu isticmaalo iibsashada, iibinta, naqshadeynta, maaraynta, raadinta, qiimaynta, wax-ka-beddelka, bar-tilmaameed, falanqaynta, bixinta, iyo ka warbixinta xayeysiisyada internetka iyo suuq-geynta; Bixinta tas-hiilaad online ah oo siinaya dadka isticmaala awoodda ay u leeyihiin in ay u gudbiyaan, wax ka badalaan una wadaagaan waxyaabaha dhabta ah, macluumaadka, khibradaha iyo macluumaadka; iyadoo adeegsaneysa isticmaalka ku-meel-gaadhka ah ee kombiyuutarka aan la iibsan karin oo kobcin kara horumarka, qiimeynta, imtixaanka, iyo dayactirka barnaamijyada moobiillada moobiilka ee qalabyada la-qabadsiinta gacanta, kuwaas oo ah, telefoonnada gacanta, casriga, kombiyuutarada gacanta iyo kumbuyuutarka kombiyuutarka; Siinta isticmaalka ku meelgaarka ah ee aan la iibsan karin ee loo adeegsado lacag bixinta elektarooniga ah; Bixinta barnaamijka barnaamijka codsiyada barnaamijka (API) ee isticmaalka farriimaha elektiroonigga ah iyo gudbinta maqalka, video, sawirrada, qoraalka,
content iyo data; Siinta isticmaalka ku meelgaarka ah ee software aan la soo bixi karin ee fariinta elektaroonigga ah; Adeegyada Khariidadaha; Bixinta ku-meel-gaadhsiinta ku-meel-gaadhka ah ee barnaamijka kombiyuutarka aan la iibsan karin ee adeegyada khariidada Adeegbixiyaha adeegga codsashada (ASP) oo leh barnaamijyo loogu talagalay adeegyada maareynta; Bixinta adeegsashada ku meelgaarka ah ee barnaamijka kombuyuutarka aan la iibsan karin ee la wadaagayo iyo soo bandhigida goobta adeegsiga, qorshaynta waxqabadyada dadka isticmaala iyo sameynta talooyin; Adeegbixiyaha adeegga codsadaha (ASP) oo leh barnaamijka si loo sahlo ama loo fududeeyo wadaaga iyo muujinta goobta adeegsiga, qorshaynta waxqabadyada dadka isticmaala iyo sameynta talooyin; Bixinta adeegsashada ku meelgaarka ah ee barnaamijka kombiyuutarka aan la iibsan karin ee loogu talagalay wareysiga bulshada iyo goobta; Adeegbixiyaha adeegga codsadaha (ASP) ee barnaamijka u leh barnaamijka si loo suurtageliyo ama loo fududeeyo khariidada bulshada iyo goobta; Bixinta isticmaalka meel gaar ah software meel-war computer aan bixi karo ee wax ka goobidda, go'aaminta iyo wadaaga meesha badeecada, adeegyada iyo dhacdooyinka xiisaha leh; Adeegbixiyaha adeegga codsadaha (ASP) oo leh bandhig barnaamijka meesha ku oolka ah ee raadinta, go'aaminta iyo wadaagida meesha alaabooyinka, adeegyada iyo dhacdooyinka xiisaha leh; Mashruuc ahaan adeeg (PAAS) oo leh barnaamijyada kombiyuutarada kombiyuutarka si loogu isticmaalo iibsashada iyo faafinta xayaysiinta; Bixinta adeegga ku-meel-gaadhka ah ee software-ka aan la gadan karin oo wax ka beddelaya sawirrada, sawirrada iyo maqalka, fiidiyowga, iyo maqal-muuqaalka-fiidiyoo leh sawirrada sawirada iyo saamaynta xaqiiqda (AR), oo ah, sawirrada, madadaalada, qoraalka, sawirrada, geotaga, summadada metadata, hyperlinks ; Bixinta isticmaalka meel gaar ah software aan bixi karo u arkaysid iyo la dhaqanka feed ka mid ah warbaahinta elektarooniga ah, kuwaas oo, images, maqal iyo muuqaal ah oo video content, video Streaming live, faallo, xayaysiisyada, news, iyo links internet, Bixinta adeegsashada ku meelgaarka ah ee barnaamijka kombiyuutarka aan la iibsan karin si loo helo maadooyinka iyo content daabacayaasha, iyo ku biiritaanka content; Bixinta adeegga ku-meel-gaadhka ah ee barnaamijyada aan la download noqon karin ee loogu talagalay abaabulida sawirrada, fiidiyowga, iyo maqal-muuqaalka-muuqaalka iyadoo la adeegsanayo tagsiyada metadata; bixiyaha adeegga Codsiga (ASP) software muuqan karo shabakadaha bulshada, maaraynta content shabakadaha bulshada, abuurida bulsho dalwaddii, iyo gudbinta ee images, maqal iyo muuqaal ah oo video content, sawiro, videos, xogta, qoraalka, fariimaha, xayaysiisyada, isgaarsiinta advertising warbaahinta iyo macluumaadka; Adeegbixiyaha adeegga codsiga (ASP) oo leh qaab
barnaamijka barnaamijka barnaamijka API (API) kaas oo fududeeya adeegyada internetka ee shabakadda bulshada, horumarinta barnaamijyada software; (PAAS) oo leh barnaamijyo kombuyuutar oo loogu talagalay isku-xirka bulshada, maareynta isku-xirka bulshada, abuurista bulsho-bulsheed, iyo gudbinta sawirrada, maqal-muuqaalka iyo muuqaalka fiidiyowga, sawirrada, fiidiyowyada, xogta, qoraalka, farriimaha, xayaysiinta, warbaahinta isgaarsiinta iyo macluumaadka xayeysiinta; Rental software software kaas oo siinaya dadka isticmaala awoodda ay u leeyihiin in ay upload, edit, iyo wadaagaan sawirrada, videos iyo maqal-maqal muuqaal ah; Adeegyada kombuyuutarrada, kuwaas oo ah, inay soo habeeyaan mawduucyada internet-ka ee lagu qeexay iyo xayaysiinta iyo abuurista warbaahinta bulshada; Bixinta isticmaalka ku meelgaarka ah ee software aan la soo bixi karin ee sawir qaadista iyo duubista maqalka, maqal-muuqaal iyo muuqaal fiidiyoow; Bixinta adeegga ku-meel-gaadhka ah ee software-ka aan la iibsan karin ee soo dejinta, soo-dejinta, qorista, awood-siinta gudbinta, iyo wadaaga sawirrada, maqal-muuqaal iyo muuqaal fiidiyoo iyo qoraallada iyo macluumaadka la xidhiidha; Bixinta isticmaalka ku meelgaarka ah ee software aan la soo bixi karin ee loogu talagalay streaming multimedia content; Siinta isticmaalka ku meelgaarka ah ee software aan la soo bixi karin oo loogu talagalay sameynta iyo ilaalinta joogitaanka internetka ee shakhsiyaadka, kooxaha, shirkadaha, iyo walxaha; Bixinta adeegga ku meelgaarka ah ee barnaamijka aan la iibsan karin ee xayeysiinta si ay ula xiriiraan oo ula falgalaan bulshada internetka; Bixinta isticmaalka ku meelgaarka ah ee kombuyuutarka aan la iibsan karin si loogu isticmaalo qaadashada iyo qaabeynta sawirada iyo duubista iyo fiidiyo fiidiyowyada; Adeegbixiyaha adeegga codsashada (ASP) oo leh barnaamijka u suurageliya ama u fududeeya qaadashada iyo hagaajinta sawirada iyo duubista iyo fiidiyoowga fiidiyoowga; Horumarinta software computer; Bixinta sheyga aan la iibsan karin ee internetka ah; Adeegbixiyaha adeegga codsadaha (ASP); Bixinta tas-hiilaad online ah oo siiya dadka isticmaala awoodda ay u leeyihiin inay u gudbiyaan, wax ka bedelaan isla markaana wadaagaan maqalka, fiidiyowga, sawirada muuqaalka, qoraalka, garaafyada iyo xogta.
Fasalka 45aad: Hawl-galka bulshada iyo adeegyada isku-xirka iyo isku-tagga; Bixinta helitaanka macluumaadka kumbiyuutarka kombiyuutarka iyo macluumaadka macluumaadka laga heli karo internetka ee shabakadaha xiriirka bulshada, barashada bulshada iyo shukaansiga; Adeegyada xiriirka bulshada ee internetka; Adeegga xaqiijinta aqoonsiga ganacsiga
OGAYSIIS WAXAA KA BEDELAYaa in dacwad sharci ah laga qaadi doono qof kasta ama shirkad isticmaala calaamada ganacsiga ama wax kasta oo la midabtakooro ama kuwa kale ku xad gudbaya xuquuqda shirkaddaas